Naannoo Finfinnee: QBOn WBO Gaachana fi Abdii sabaa wajjiin jirra. – Kichuu
[ January 28, 2022 ] 𝐌𝐈𝐒𝐄𝐄𝐍𝐒𝐎𝐓𝐀 𝐀𝐁𝐎 𝐀𝐃𝐀𝐌𝐒𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐔𝐔𝐍 𝐈𝐓𝐓𝐈 𝐅𝐔𝐅𝐄𝐄𝐑𝐀	News
[ January 28, 2022 ] ODDUU AMEE Dhamsaa Hatattama Qeeroo Dhufee 28/1/2022 BREAKING News	Videos
[ January 28, 2022 ] Ethiopia quadruples military spending- Ethiopian spy agency recommends action against Fano	Africa
[ January 28, 2022 ] Leaked Ethiopian Foreign Ministry document proposes talks to end Tigray conflict	Africa
[ January 28, 2022 ] US shares additional 1,680,120 doses of Pfizer vaccine with Ethiopia JANUARY 28, 2022	Health
HomeAfaan OromooNewsNaannoo Finfinnee: QBOn WBO Gaachana fi Abdii sabaa wajjiin jirra.
Naannoo Finfinnee: QBOn WBO Gaachana fi Abdii sabaa wajjiin jirra.
Naannoo Finfinnee: QBOn WBO Gaachana fi Abdii sabaa wajjiin jirra .
Naannoo Finfinnee irra taanee diina uummata karaa itti ba’u teenyee haattootaa falmana.
Diini Finfinnee irraa hin miliquu Finfinnee naannoofnee QBOn eegaa jirraa .
Diina keenya qabnee hidhanoo hiksiifna.
Diina keenya harka qabnee Qilinxxoo bufna.
Diina keenya haarka qabnee Ma’aakalaawii bufna.
ONN: Naannoo Finfinnee, Gafarsatti, Poolisii Federaalaa tu Mana Diiga. Caamsaa 29, 2018.
Godina Addaa Naannawa Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa keessatti reebichaafi saaminsi poolisoota Feederaalatiin gaggeeffamu cimee itti fufee jira. Mootummaan Wayyaanee ummata rakkoo manaatiif mana sharaan hidhatanii keessa jiraatan irraa poolisii feederaalatiin diiysisee namoota hedduus miidhaan irra gahee hospitaala galanii jiraachuufi rakkoon kunis akka rakkoo amantii fakkaatu gochuuf hordoftoota amantaa Kiristaanaatiin masgiida kana diigaa jechuun masgiida bakka kanatti ijaaramee yeroo dheeraaf ummanni itti fayyadamaa ture diiysisee jira. Sababa kanaafis ummanni amantaa lamaanituu yeroo ammaa kana haala yaaddeessaan wajjiin jiraataa jira. Ummanni jireenyi itti hadhaayee bakka jiraatan dhabanii maatii isaanii waliin mana sharaa keessa jiraatan kunneen, innumtuu irratti humnaan diigamee, dubartiin deessun, daa’imman, maanguddooliin, walumaa galatti ummanni lakkoofsaan guddaa ta’e aduufi rooban dachitti gatamee rakkataa jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.
Namoonni manneen isaanii irraa diigame kunniin ijoollee Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa bakka gara garaarraa dhufanii Finfinnee keessa hojii humnaatin maatii horatanii jiraatanii fi maatii isaaniis jiraachisaa jiran kunniin rakkoo qaal’iinsa jireenyaa biyyattii keessatti mudateen kiraa manaa kaffalachuu dadhabuun haala rakkisaa keessa jiraataa turanii ta’uun barameera.
Akkuma beekamu mootummaan Wayyaanee qotee bultoota Oromoo naannoo Finfinnee lafa isaanii irraa humnaan buqqisee abbaa qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaatti gurgarchuun ummata Oromoo Irraa dachee inni irratti dhalate saamaa akka yoona ga’e beekamaa dha.
OMN: Haasawa obbo Lammaa fi Haala Yeroo (LIVE) Caamsaa 29, 2018
PBMNO Ob. Lammaa Magarsaa fii hujii inni sabaf hojjata jiru ilaalichise Ob. Jawar Mohammed maal ja’u?
𝐌𝐈𝐒𝐄𝐄𝐍𝐒𝐎𝐓𝐀 𝐀𝐁𝐎 𝐀𝐃𝐀𝐌𝐒𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐔𝐔𝐍 𝐈𝐓𝐓𝐈 𝐅𝐔𝐅𝐄𝐄𝐑𝐀
ODDUU AMEE Dhamsaa Hatattama Qeeroo Dhufee 28/1/2022 BREAKING News
Ethiopia quadruples military spending- Ethiopian spy agency recommends action against Fano
Leaked Ethiopian Foreign Ministry document proposes talks to end Tigray conflict
US shares additional 1,680,120 doses of Pfizer vaccine with Ethiopia JANUARY 28, 2022